Su'aalaha Had iyo Jeer La Is Weydiiyo - Nalal Eex MediaLight
Miyuu midab MediaLight nacaybka midabku beddelayaa?
Maya. Diiradeena kaliya ayaa ah wax soo saar sax ah, tixraac tayo leh fiidiyow eexasho cad nalal, laambadaha miiska, waxyaabaha la isku dhejiyo iyo nalalka.
Ma samaynayno wax soo saar midab beddelaya maxaa yeelay hadafkeenu waa inaan kobcino midabada TV-gaaga, Maaha darbigaaga. Btaas macnaheedu maahan in nalalkayagu aysan awood u lahayn inay beddelaan booskaaga. Iftiimintayada xoogga leh ee loo ekeysiiyey D65 eexasho cad ayaa kugu farxi doonta iyada oo ku siinaysa jawiga daawashada ee ku habboon TV-gaaga.
Taladayada? In kor loo qaado jawiga daawashada. Ha ku darin waxyaabaha kaa mashquulinaya ee sababa isbeddelada dhererka dhererka, midabka iyo heerkulka midabka.
Haddii aad waqti iyo lacag ku bixisay hagaajinta shaashaddaada, waxaad ka warqabtaa in laydhadhka eexda ee is beddelaya midabbada ama isticmaalka dhibic cad oo khaldan "xisaabayn"muujintaada aragtida goobjoogaha.
Nalalkayagu darbigaaga kama dhigayaan midabbada inay beddelaan, laakiin sidoo kale saameyn xun kuma yeelan doonaan midabada shaashadda sida nalalka midabbada beddela.
Haddii aad rabto inaad ku xoojiso muuqaalkaaga nalalka eexda ee hagaajiya tayada la dareemo ee midabada iyo kala duwanaanta shaashaddaada, iyadoo yareyneysa daalka indhaha iyo ka hortagga muuqaalka, waxaad timid meeshii saxda ahayd. MediaLight waxaa loo aqoonsan yahay saxsanaanta, kalsoonida iyo qiime cadaalad ah xirfadlayaal wax soo saar kadib iyo macaamiilba.
Warka wanaagsani waa in natiijooyinkeena tayada sare leh ay ka dhashaan cimri dheer. Meesha LED-yada badeecadu ay leeyihiin rajo nololeed oo qiyaastii 1 sano ah, mid kasta oo ka mid ah qalabka loo yaqaan 'MediaLight strip' waa la dammaanad qaadayaa muddo 5 sano ah, taasoo muujineysa ereygii hore, "mid soo iibso, hal mar ooyo."
Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in amarkaygu yimaado?
Si dhakhso badan! Waqtiga 99%, amarada Mareykanka waxay yimaadaan 1-2 maalmood!
Sida aan wada ogsoonahay, USPS-ku waa qalalaase kulul hada. Waxaan go'aansanay inaanan bixin karin heerka adeegga aan u baahan nahay inaan bixino haddii aan ku tiirsanaan lahayn waqtiyada dirista boosta.
Hadda, waxaan ku rarnaa dhammaan amarrada FedEx 2-Day ee USA iyo FedEx Mudnaanta Caalamiga ah ee adduunka intiisa kale.
Waxaan ku saleysanahay New Jersey waxaanna ka soo rarnaa amarradeena New Jersey. Amarada la soo saaray ka hor 3-da duhurnimo ayaa la raraa isla maalintaas.
Amarada inta badan Bulshada Dhaqaalaha Yurub, Kanada iyo Mexico, Kuuriyada Koofureed, Singapore, Taiwan, Hong Kong sidoo kale badanaa waxay yimaadaan 2-3 maalmood. Waxaan u rarnaa adduunka oo dhan 6 maalmood gudahood.
Waxaan had iyo jeer rarnaa amarrada caalamiga ah ee VAT-ka iyo waajibaadka canshuuraha ee lagu soo daray sicirkayaga dhoofinta. Wax kale kuma lahaan doontid bixinta! Waan hubin doonnaa inaan kuu soo celinno dukaammadaada haddii ay soo daahdo, illaa iyo inta aan u-qalano soo-celinta dammaanadda FedEx. Haddii uu lumo, waxaan u diri doonnaa bedelkiisa isla markiiba!
Xaqiiqdii ma arki doonaa farqi marka loo eego laydhadh midabkoodu hooseeyo?
Haa. U fiirso midabbada maqaarka hoostiisa iftiin tayo hooseeya ka dibna mar kale hoosta CRI 98 MediaLight nalka eex ama nal. Ilaha iftiinka ee aan lahayn muuqaalka casaanka ee muhiimka ahi uma muuqdaan kuwo hagaagsan marka laga eego midabbada maqaarka. Mid ka mid ah qayb muhiim ah oo ka mid ah hagaajinta muujinta ayaa hubinaysa in midabbada maqaarku u muuqdaan kuwo dabiici ah.
Iyadoo la adeegsanayo soo-gudbin (sida TV-ga), iftiinka kama muuqan karo muuqaalka, laakiin astaamaha iftiinka hareeraha ee muuqaalka jawiga ayaa wali leh -bedelka saamayn ku yeelano waxa aan ku aragno muuqaalka.
Waxay la mid tahay sababta iftiinka diiran uga dhigayo TV-ga mid buluug ah, ama laydhadhka leh magenta aad u badan ayaa sawirka ka dhiga mid cagaar ah. Laakiin halkii aad ka ahaan laheyd isku-duwaha isku-darka chromaticity-ka, is waafajinta muuqaalka muuqaalka ah waxaa sababa qaybinta awoodda isha ee isha iftiinka.
Markii aan ula qabsano laydhadhka khaldan, soo bandhigu sidoo kale wuxuu u muuqdaa mid aan sax ahayn, laakiin dhinaca ka soo horjeedka.
Wareer? Ka fikir sida iPhones iyo taleefannada Android ay hadda u leeyihiin dejinno la jaan qaada barta cad ee qolka. Haddii aad daarto ama darto TrueTone ama "qabatinka muujinta", barta cad ee bandhiggu si aad ah ayuu isu beddelayaa, taas oo ku tusaysa inta iftiinka deegaanku u beddelay aragtidaada shaashadda. Haddii aadan isticmaalin goobahaas, bandhiggu wuxuu umuuqan karaa mid diiran ama qabow, waxay kuxirantahay laydhka.
Sababtoo ah waxaa jira midabyo ka maqan laydhadhka midabka liita ee bixiya (guud ahaan hooseeya CRI), cilladaha muuqaalka ayaa saameyn ku yeelan kara sida aan u aragno isla midabada isla muuqaalka. Qaar badan oo ka mid ah feeraha midab-dareenta ee retinaskeenna ayaa u heellan inay arkaan casaan marka loo eego kuwa kale ee hordhaca ah, muujiyaduna waxay ka kooban yihiin subpixels casaan, cagaar iyo buluug ah.
Intaa waxaa sii dheer, ilaha iftiinka ee aan lahayn casaanka ayaa ka dhigaya iyada oo la adeegsanayo iftiin jaalle ah si loo gaaro bartilmaameedka bartilmaameedka cad (huruud + buluug = hooseeya CRI cad). Waxaan aad ugu nugul nahay iftiinka huruudda / cagaarka ah, oo qayb ahaan sharrax ka bixinaya sababta ay nalalkaas leh midab liita ee bixiya inta badan ay u muuqdaan jaalle iyo cagaar halkii ay u ekaan lahaayeen iftiinka qoraxda.
Nalka cas ee Remote-ka kama arki karo, batrool dhintay miyaad ii soo dirtay?
Maya, ma arki kartid LED-ka infrared-ka ah koontaroolka fog maxaa yeelay waa Kacsan. Kontaroolka fog fog si muuqata uma iftiimiyo. MediaLight ma adeegsato mashiinka masaafada fog laga hago. Uma muuqanayso iftiimin marka aad riixdo badhan.
Qeyb ka mid ah jahwareerka waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in durkeennii asalka ahaa ay ahaayeen RF oo si muuqata u iftiimisay. Remote-dii ugu dambeeyay ee RF waxaa la raray 3 sano ka hor.
Haddii kontoroolkaaga fog uusan u shaqeynayn sidii la filayay, waxaan hubnaa 99% taas mid ka mid ah hagaajintaas ayaa xallin doonta dhibaatadaada.
Nalalka miyey daaraan oo ka demiyaan TV-ga?
Qaar ka mid ah soo saarayaasha ayaa sheegashadan ku saabsan laydhadhkooda LED-ka, si kastaba ha noqotee, tani waa xayaysiis been abuur ah oo ugu liidata oo marin habaabin ugu fiican Nalalka eexda ku xiriirsan TV-ga ayaa daari doona oo damin doona TV-ga kaliya moodooyinka ka jaraya awooda korantada USB-ga markii TV-ga la xiro.
TV yada oo dhan miyaanay sidan samaynayn? Maya, maya.
TV-yada qaar waxay ka baxaan dekedda USB-ga markii TV-ga uu dansan yahay. TV-yada kale waxay rogaan dekedda USB-ga daaran oo ka bax 10kii ilbidhiqsi kasta marka TV-ga la daminayo (tusaale ahaan Sony Bravia).
Tani waa sababta aan ugu dareyno adabtarada 'AC' iyo aaladda kontoroolka fog ee 'MediaLights' badankeena TV-ga.
Waxaad ku bari kartaa amarrada hagida kumbuyuutarka agabkaaga fog-fog ama xarunta caqliga leh ee leh qalabka loo yaqaan 'IR blaster'.
Si kastaba ha noqotee, haddii TV-gaagu demiyo korontada USB-gaaga markii TV-ga la daminayo, qalabkaaga 'MediaLight' wuu damin doonaa markii uu lumiyo awoodda.
Tani waxay noo horseedaysaa caankeenna soo socda su'aal:
Maxaa ku daboolan dammaanadda 5ta sano ah?
Wax walba waa la daboolay.
"Eeygu wuxuu calaashaday my remote"
"Waxaan si kama 'ah u jaray dhamaadka korontada ee xarigga nalka."
"Qeybta hoose ayaa daadadku qaaday waxayna la tageen masraxa gurigeyga."
Macaamiisheena ayaa dib nooga taageeri doona arintan; waligeen ma diidin dalab damaanad ah. Waxaan u adeegsannaa qaybo tayo leh nalalkayaga eex waxaa loo dhisay inay waaraan.
Si kastaba ha noqotee, haddii wax qaldamaan, waxaan u aragnaa inay tahay fursad aan ku xusuusinno sababta aad noo dooratay. Haddii aan ku tartami lahayn sicirka, annagoo adeegsaneyna tayada sare, qaybaha ISF-shahaado ee aan isticmaalno, waan dhiman lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanay inuu jiro dalool suuqa marka ay timaado saxnaanta, tayada iyo adeegga.
Waxaan door bideynaa inaan diirada saarno sameynta nalalka waaweyn halkii aan isku dayi lahayn inaan ogaanno in dalabku daboolan yahay iyo in kale. (Tani macnaheedu maahan inaanan weydiisan doonin inaan cadeyno inaad leedahay nalalka kahor intaadan dirin qeybaha bedelka).
Digniinta kaliya waa in haddii aad ka dalbatay meel ka baxsan Mareykanka, gobol aan ku leenahay qaybiyaha maxalliga ah, waxaa lagu weydiin karaa inaad bixiso wax ka dhakhso badan heerka caadiga ah ee boostada xirmada caalamiga ah ee USPS ee qaybaha beddelaadda.
(Nalalka miiska ee loo yaqaan 'MediaLight miisaska' iyo nalalka nalka leh waxay leeyihiin dammaanad 3 sano / 30,000 saacadood ah).
Ma bixin karaa wax kayar haddii aanan rabin dammaanadda 5-ta sano ah ee MediaLight Mk2 Flex ama Eclipse?
Dadku waxay isweydiiyaan su'aashan waqti ka waqti. Kama qaadno lacag dheeraad ah dammaanadda. Waxaan bixinaa dammaanad 5 sano ah maxaa yeelay alaabadayada waxaa loo farsameeyay inay ugu yaraan 5 sano shaqeeyaan. Haddii aanan ku darin dammaanadda, weli waxaan ka qaadi doonnaa isla qaddarka sheyga. Waxaa la filayaa inay wax badan sii dheeraato sababta oo ah sida loo qaabeeyey, sidaa darteed waxaan kuu ballanqaadeynaa inaadan u baahnayn inaad bixiso boqolkiiba kale shan sano.
Nalalka miyey xusuustaan ​​heerkii dhalaal ee hore markii la demiyo?
Haa, way sameeyaan.
Maxay MediaLight uga qiimo badan tahay qaar ka mid ah nalalka rakhiis ah ee Amazon iyo Alibaba?
Haddii aad raadineyso nalalka tafaariiqda oo aan ku lug laheyn mala-awaal, ka dib ha u sii eegin. MediaLight waxaa loogu talagalay inay ku siiso adeegsadaha iftiin saxan oo sax ah xilli kasta oo aan guul darreysanin - waa la damaanad qaaday! Kaliya maahan qiimayaasheena kuwo la awoodi karo laakiin damaanadkeenu wuxuu dabooli doonaa warbaahintaada MediaLIght muddo dheer kadib markii nalalkaas raqiiska ahi ku dambeeyaan qashinka. Uma baahnid inaad iibsato qaybo beddelaad ah ama nal kale oo eexasho markale (illaa 5 sano).
Waxaan u adeegsannaa jaantusyada loo yaqaan 'ColorGrade SMD' ee saxda ah saxnaanta chromaticity iyo midab bixinta Nalalkaas kale ma. Taas macnaheedu maaha inay yihiin nalalka xun ee kaamamka ama iftiiminta jaranjarada hoose ee guriga, waxay kaliya ka dhigan tahay inaysan ku habboonayn iftiiminta eex ka dambeysa muuqaalkaaga qaabaysan.
Heerka ugu hooseeya ee muujinta midabka (CRI) ee loo yaqaan 'MediaLight' ee sannadka 2020 waa ≥ 98 Ra iyo TLCI waa 99. Sannadkeennii ugu horreeyay (2015), nalalkayagu waxay ka yaraayeen 91 Ra. Barnaamijkeena 'MediaLight Pro' wuxuu leeyahay CRI aad u adag oo ah 99 Ra iyo TLCI oo 100 ah.
Sidee sax u yahay taasi? Qaarkood waxay dhihi lahaayeen taasi waxay ka dhigeysaa iyaga mid aan laga sooci karin qorraxda. Ma dhahno taas, si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay, iyadoo la adeegsanayo spectrophotometer, waxaan ku kala saari karnaa ilayska iftiinka kasta ee dadku sameeyo. Hase yeeshe, aad iyo aad buu u fiican yahay. Gaar ah
Marka laga reebo tayada jajabkeena, waxaan ku darnaa wax kasta oo aad ugu baahan laheyd qaabeynta nalka toosan ee ku habboon. Waxaan ku darnaa dimmer, aaladda kontoroolka fog (moodooyinka TV-ga) iyo sidoo kale isku-xirka maareynta siligga iyo xargaha velcro si loo hagaajiyo rakibiddaada.
Badanaa ma noqon doonno ikhtiyaarka ugu raqiisan, laakiin calaamadeynteennu way ka xishood badan yihiin kuwa nidaamyada iibinta ee lagu sameeyo jajabyo liita, PCB raqiis ah oo aan lahayn astaamo gabi ahaanba loo baahan yahay sida cabbirka. Waxaad u isticmaali doontaa MediaLight-kaaga sifiican mustaqbalka, muddo dheer kadib markii nalalka tayada hooseeya ay kujiraan qashin-qubka. Weydii agagaarka. Waad arki doontaa. Waxaan daboolaynaa wax kasta oo ku jira damaanadkeenna maxaa yeelay MediaLight waxaa loo dhisay sidii taangiga oo kale.
Dhab ahaantii ma arki doonaa farqi marka loo eego laydhadhka jaban?
Miyaad doorbideysaa inaad daawato muuqaalka qaabaysan? Hadday sidaas tahay, waxaad gabi ahaanba arki doontaa farqiga markaad saxayso nalalka eexashada ee 'MediaLight. Sida aan macquul aheyn ee ay umuuqato, nalalka aan saxda aheyn ka dambeysa muuqaalka qaabeynta oo asal ahaan "uncalibrates" soo bandhigida maxaa yeelay waxay ku yeelaneysaa saameyn dhimis ah waxa aan aragno. Haddii aad dhigto buluug, nalalka CRI-ga hooseeya ee TV-ga gadaashiisa, sawirkaagu wuxuu u eegi doonaa indhahaaga.
Sideed u aragtaa nalalka beddelaya midabada TV-ga?
Ma rabtaa inaad darbiga ka dhigto mid midab leh, mise waxaad isku dayeysaa inaad sawirka kor u qaaddo? Macaamiisheennu ma fiirinayaan darbiyada. Waxay aad u jeclaan lahaayeen inay daawadaan waxyaabaha shaashadda ku jira.
Laakiin halkan uma joogno inaan doodno. Soo iibso waxaad rabto inaad iibsato. Dhiigbax khafiifa waa shay dadka badankiisu isku dayaan inay tirtiraan, oo aan ku darin. Xaaladaha ugu xun, waxay ka dhigeysaa sawirka mid liita oo midabada ay dhif u dhigantaa TV-ga. Kaba sii darane, badiyaa waa caajis. Haddii aad tahay nooca OCD annaga oo kale ah (noocayaga macaamiisha ah ee # 1, jidka agtiisa), waxaa laga yaabaa inay moos kuu kaxeyso. Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu helo qalad. Waa mashquulineysaa.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku qarashgareyso lacagta noocaas ah nalalka midabada leh, waxaan ku doodi doonnaa inaad ka heli lahayd boog badan oo baakadka ah oo aad daboosho qadar isku mid ah oo derbiga ah adoo iibsanaya bandhig weyn. Iyada oo la soo bandhigayo 65 "-90", sawirku waa mid aad u milicsanaya. Markuu Philips bilaabay Ambilight 2004, TV-yada waxay gaarayeen ilaa 40 "-50". Weli waxaa jiray darbi qaawan - taasi maahan cudurdaar, laakiin nalalka midabbada leh ayaa nacasnimo ugu muuqanaya TV "85" ah mooyee haddii aadan haysan 14 saqaf oo cag ah.
Nalalkaagu ma beddelaan midabada? Ma cad diirran yihiin? Caddaan ma qabow yihiin?
Maya. Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrado ku saabsan waxa u muuqda sida ugu fiican. Waxaan leenahay saynis iyo heerar. Nalalkayaga ayaa shahaado ka haysta Aasaaska Sayniska Sawirka. MediaLight kasta. Laga soo bilaabo $ 32.95 Mk2 Eclipse illaa cutubyadeena ugu qaalisan waa shahaado ISF.
Haddii aad eegto goobaha fariimaha, waxaad ka akhrisan kartaa wax ku saabsan caddaan qabow, caddaan diiran iyo qaansoroobaad midabkeedu yahay eex ilaa indhahaagu dhalaalayaan. Haddii midkoodna sameeyo wixii la rabay inay sameeyaan, ma awoodi karno inaan soo saarno meel aad u badan oo ka mid ah nalalkayaga (xaqiiqda: kharashaadka waxsoosaarka ayaa ka badan kuwa ay iyagu leeyihiin tafaariiqda sicirka iyo faa'iidooyinka soo kordha ayaa aad uga hooseeya).
Haddii aad tahay xirfadle midab-yaqaan, waxaannu kuu samaynay 'MediaLight'. Haddii aad danaynaysid tiyaatarka guriga oo aad ogtahay qiimaha muujinta qaabaysan, waxaan kuu samaynay The MediaLight.
Waxaan soosaaraynaa CRI-ga ugu wanaagsan (98-99 Ra) CIE Standard Illuminant D65 (6500K; x = 0.3127, y = 0.329) oo waafaqsan ("tixraaca heerka" fiidiyowga caddaanka ah) nalalka eex ee loogu talagalay xirfadleyaasha iyo suuqyada macaamiisha waxaanna ku iibinaa a qiimo aad u macquul ah oo leh dammaanad 5 sano ah.
Tixraac eex eexasho ayaa ah mid ku saabsan sameynta sawirka sida agaasimaha loogu talagalay. Waxaan u maleyneynaa inaan ka yare yareyn karno qaar - haddii aad jeceshahay nalalka midabada leh ee ka soo ifaya derbiyadaada, iskuma dayeyno inaan kaala hadalno iyaga. Ka dib oo dhan, ma jiro xisaabinta dhadhanka.
Si kastaba ha noqotee, in midab la dhigo gadaasha muuqaalka ayaa beddeleysa aragtideena waxa ka muuqda bandhigga. Tani waa sida indhaheenna iyo maskaxdeennu u shaqeeyaan. Midab diiran sida liinta ama casaanka ka dambeeya muuqaalka ayaa ka dhigi doona wax kasta oo shaashadda ka muuqda mid buluug ah. Heerkulka midabka qabow sida buluugga ah, ayaa wax kasta ka dhigi doona mid casaan ah. Tani ma noqon karto musiibo marka la daawanaayo Bachelorette The, laakiin ma rabi doontid inaad ku sameyso qolkaaga midabaynta ama markaad daawaneysid Jebin xun.
Nalalka MediaLight Eex Lights sax ma yihiin D65?
Nidaamka Nalalka ee loo yaqaan 'MediaLight Beas Lighting' wuxuu bixiyaa aad u saxan jilitaanka D65. Markaad akhrido luqadda suuqgeynta ee ballanqaadaysa "qumman" ama "dhammaystiran" D65, fiirso boorsadaada.
Ma jiraan ilo iftiin D65 oo dhab ah, kaliya jiliyayaal. Tayada jilitaanka waxaa lagu qiimeyn karaa CIE Metamerism Index. Muuqaalka buuxa, aadka u sarreeya ee CRI ColorGrade ™ LEDs ee nalalka nalalka 'MediaLight Bias Lights' ayaa matalaya waxa ugu fiican ee hadda la heli karo.
Waxaan xoogaa ka feejigan nahay shirkadaha ugu yeera alaabadooda inay yihiin "kaamil" ama "sax ah D65" inay lacag badan ka qaadaan oo ay doorbidaan inaysan ku dhaqaaqin dhaqankan. Wax soo saarkayagu waafajinayaan heerarka warshadaha. Waan ku faraxsanahay sida ugu wanaagsan ee aan isugu soo ururinay isla markaana Imtixaanka Sayniska Sawirka ayaa oggol. Waxaan nahay shahaado ISF oo nalalkayaga waxaa lagu tijaabiyaa saxsanaanta midabka iyo joogteynta. Waxaan door bidnay inaan hoos u dhigno oo aan si xad dhaaf ah u bixinno.
Muxuu mitirkayga Lumu ii siiyaa cabbiro ka baxsan 300-5000K (labada dhinacba?)
Sida laga soo xigtay LUMU-da bogagga taageerada soo saaraha, Cabbiraadaha hoose ee CCT ee aaladda Lumu wuxuu dami karaa illaa 300K iyo cabbiraadaha sare ee CCT-ga waa la xiri karaa illaa 3000K. Nalalkayagu waxay ku dhex jiraan labadaas daraf 6500K oo qeexitaankeena qashin-qubka ayaa ah badan ka adag dulqaadka qalabka Lumu.
Si fudud haddii loo dhigo, waan ka xunnahay haddii aad ku helayso natiijooyin aan sax ahayn Lumu-gaaga. Nalalkayaga ayaa dib loo eegaa inta lagu jiro geedi socodka wax soo saarka, waxaana si madax banaan looga xaqiijiyey shaybaarka Xarunta Sayniska Sawirka. Uma beddeleyno nalalkayaga si ay si kala duwan ugu cabbiraan nooc gaar ah oo mitir ah waxaana jira arrimo saameyn ku yeelan kara cabbiraadaha laga qaaday meel ka baxsan deegaanka sheybaarka.
Qaarkood waxay weydiiyeen, "Maxay u sameeyaan mitir aan awood u lahayn cabirrada saxda ah?" Jawaabteenu waa saxsanaanta, meelaha qaarkood, waa mid qaraabo ah oo dhererka dhererka ee la cabirayo sidoo kale waxay ku dhacayaan kaladuwanaansho kala duwan oo heerkulka midabka ah iyo awood qaybinta awooda muraayadaha, oo laga yaabo in si sax ah loogu cabiro aaladaha qaarkood
Sawir qaadida, farqiga udhaxeeya 2300K iyo 2400K ayaa indhaha aadamaha aad ugaga muuqda marka loo eego faraqa udhaxeeya 6500K iyo 7000K iyo isticmaalka tungsten ku saleysan ama laydhka u dhigma ee filimka badanaa waa 3200-5000K. Tani waa, marka loo eego websaydhka Lumu, halkaas oo natiijooyinka aaladaha sida Lumu ay yihiin kuwa ugu saxsan.
Mitirada loo adeegsaday wax soo saarkeenna iyo tijaabooyinkeenna, si kastaba ha noqotee, waxay awood u leeyihiin cabirro sax ah oo ka sarreeya heerarka CCT ee ka sarreeya $ 200 dongle. In kasta oo hal nuur laga yaabo inuu ku siiyo natiijo u dhow 6500K mid ka mid ah aaladahaan, aaladda waxay ku tiirsan tahay fikradaha ku saabsan awood qeybsiga muuqaalka ee nalalka oo ka baxsan xalka cabirkiisa iyo awooddiisa.
Immisa lumen ayaa nalkaaga eexda uu soo saaraa? Miyay dhalaalayaan oo ku filan bandhigyada HDR?
5v 1a ileyn kama badnaan karo iftiinka ugu badan ee aragti ahaaneed ee qiyaastii 400 lumen ah. Tani way kafiican tahay sida ay noqon laheyd, waxaadna wali ubaahan doontaa inaad nalalkaaga si weyn uqariifiso si aad uhesho heerar tixraac. 5v strips ka waaweyn ayaa si fudud iftiinka ugu faafiya aag aad u balaaran - ma ahan kuwo dhalaalaya, marka laga reebo in yar oo laga reebay. Tusaale ahaan, a 6 inch strip wuxuu ka dhalaal badnaan doonaa 4 inch strip.
Hadaad ubaahantahay laydh ifaya, guluubka nalalka 'MediaLight 800' ama nalkayaga 12v iyo 24v ayaa siiya iftiin aad ufarabadan. Si kastaba ha noqotee, xariijimaheena '12v strips' ma iibiyaan ku dhowaad sidoo kale nalalka ku shaqeeya USB-ka maxaa yeelay iftiinka dheeriga ah looma baahna, dadka badankooduna waxay doorbidaan inay ka xoogsadaan TV-ga.
Our MediaLight xarig keliya wax soo saar ugu badnaan aragti ahaan ugu badnaan 400 lumens (42 LED ah qiyaastii 20lm midkiiba). Tani waxay la mid tahay waxa iftiinka soo-baxa ee laydh dhaliyaha caanku soo saari lahaa. Waxaan isticmaalnaa kaliya 5050 (5x5mm) LEDs, ma ahan noocyada yar yar ee daciifka ah 3528 (3.5x28mm). Kuwani maaha badeecooyin badeecado LED ah. Waxay ku dhisan yihiin kuwa loo yaqaan 'LED' ee aan ka helno. Waxaa jira, si kastaba ha noqotee xaddidaadaha dhalaalka marka ay ka baxayaan awoodda USB. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah inta badan eexda nalka ayaa lagu socodsiiyaa cabir, uma badna inaad la kulmi doontid xaddidaadyadan isticmaalka caadiga ah.
Our Baabuurta MediaLight wax soo saarka ku dhowaad 400 lumen dhalaalka ugu badnaan. Waxaa jira, si kastaba ha noqotee, xaddidnaanta dhalaalka markaad ka baxeyso awoodda USB. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah inta badan eexda nalka ayaa lagu socodsiiyaa cabir, uma badna inaad la kulmi doontid xaddidaadan isticmaalka caadiga ah.
Ku saabsan HDR, haa way iftiimayaan. Fiidiyowga HDR wuxuu adeegsadaa gobollada dhalaalka si uu uga caawiyo muuqaalku inuu u ekaado sida dhabta ah. MediaLight wuxuu ka batay shuruudaha wax soo saarka ee iftiinka eex HDR ah.
Miyey MediaLight ku filan tahay bahalkayga 85 "TV?"
Haa. Waa hubaal inay tahay. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhimeyso cabbirka fog ee kujira. Haddii TV-gaagu uu saaran yahay darbi korkiisa, waxaad u badan tahay inaad rabto 5m ama 6m Mk2 Flex.
Xaaskeyga / xaaskeyga iima oggolaan doono inaan derbiyada ku rinjiyo midab cad ama hooska dhexdhexaadka ah ee cawl, maxaad kugula talinaysaa?
Tani si fiican ayey u shaqaysaa. :)
Dhammaan halista, waxaa jira xalal kale, sida dhigista meel dhexdhexaad ah (ku dheji darbiga ama dharka) TV-ga gadaashiisa.
Xariga ma la jari karaa?
Haa, waad kala goyn kartaa inta u dhexeysa naxaasyada xiriiriya meel kasta oo ka mid ah mareegaha 'MediaLight'.
Miyuu iftiinka midab-takoorka 'MediaLight' soo saaraa iftiin buluug ah?
Maya. Nalalkayaga eexdu runti waa 6500K iyo ≥ 98 CRI oo loogu talagalay moodelkeena caadiga ah ee MediaLight iyo 99 Ra ee khadkayaga MediaLight Pro. Mararka qaarkood waxaan u maleyneynaa in soosaarayaasha nalka LED-ka eexashada kaliya ay qiyaasayaan 6500K maxaa yeelay cabbiraadaha inta lagu jiro tijaabooyinkayagu waxay ahaayeen kuwo guud ahaan iyo muuqaal ahaanba xun. Waxaan ku xaqiijineynaa dhammaan qeybahayada qalab casri ah ka dibna waxaan hubineynaa innaannaan isku qasin inta la uruurinayo xargaha nalka. Kuwani maaha aaladda aquarium light light oo dib loogu beddelay nalalka eex.
Mid ka mid ah sababaha aan u isticmaalno xarig madoow halkii aan ka isticmaali lahayn xarig cad, oo ka waxtar badnaan laheyd, ayaa ah in xariijimaha cad ay faragalin badan ku yeelan karaan heerkulka midabka marka loo eego xargaha PCB-da madow, gaar ahaan markay gaboobaan. (Fiiri dhammeystirka cad ee korantada ee fadhiista muddo dheer).
Khubarada ayaa isku raacay in nal eex waa in noqo midabka iftiinka qoraxda maalin xasilloon, ama wax loo yaqaan heerka iftiinka CIE D65. Waxaan u adeegsanay Sawir-baaris Sawireysan SpectraScan PR-650 iyo Sekonic C7000 si aan u cabirno diode-yada dabka iftiinka ka baxaya. Wada-hawlgalayaashayada ayaa markaa ku tijaabinaya PR-670-kooda si ay u xaqiijiyaan natiijooyinkayaga.
Haddii xal ka wanaagsan uu jiri lahaa, ma aanan la imaan lahayn suuq 'The MediaLight'. Si fudud haddii loo dhigo, ma jiro qalabyada kale ee nalka ku shaqeeya ee ku saleysan LED-ka ee suuqa xitaa kuma soo dhowaadaan 6500K, in kasta oo ay ku yiraahdaan daasadda. Iftiinka Antec ee aan tijaabinay wuxuu ka badnaa 9500K, oo ficil ahaan ah buluug cirka ah. Nooc kale oo caan ah ayaa si naxdin leh uga badnaa 20,000K! Kuwayagu waa 6500K, waana uga jeednaa. Is dhinac dhig dhinacna isu eeg. Wanaagsan, ku iftiimiya kaarka cawlan ee dhexdhexaad ah oo cabir ku samee baaris lagu hagaajiyay. Waad ku farxi doontaa.
Nalalkayagu sax maahan oo keliya ku filan isticmaalka guriga, waxaa isticmaala xirfadlayaal midabkeeya darajooyinka fiidyowyada aan ugu raaxeysanno nidaamyada tiyaatarka gurigeenna. Xaqiiqdii, haddii aad tahay xirfadle akoon kula leh Flanders Scientific, waxaan kugula talineynaa inaad ka iibsato MediaLight iyaga.
Waa maxay tusmada midab bixinta (CRI) ee LED-yadaada?
Laga bilaabo 2020, dhammaan nalalkayagu waxay leeyihiin CRI ugu yaraan 98 Ra. Barnaamijkeena caanka ah ee 'MediaLight Pro' wuxuu leeyahay CRI 99 Ra - warshad marka hore.
Nalalkaaga eex ee D65 ma waafaqsan yihiin?
Nalalkayaga eexdu waa kuwo aad u sax ah - oo ka saxsan xaqiiqda marka loo eego xalka nalalka iftiinka ee laydhka - oo leh CRI sare iyo heerkul midab leh oo isku xidha 6500K
Si kastaba ha noqotee, ma aaminsani in mid ka mid ah nalalka nacaybka ee suuqa, oo ay ku jiraan kuweena, loo suuq geeyo D65. Iftiinka heerka caadiga ah ee 'CIE D65' waxaa laga soo qaatay iftiinka qoraxda oo cirka waxyar ka buuxan. Aragtidayada, iftiin kasta oo eex macmal ah "waa loo ekeeyay D65," wuxuuna leeyahay awood qeybsi muuqaal oo kala duwan marka loo eego qoraxda dabiiciga ah.
Haa, haa. Ilaa iyo inta uu LED awood u leeyahay jilista heerka iftiinka CIE D65, MediaLight waa xal aad u sax ah. Dabcan, waxaad isla markaaba aqoonsan doontaa aaladda iftiinka dhaadheer ama iftiinka LED-ka ee hoosta spectrophotometer. Si fiican loo sifeeyey (oo laga saarayo infrared xad-dhaaf ah) guluubka hagoonka tungsten wuxuu ku dhowaanayaa qaybta awoodda korantada ee 'D65', laakiin qaabka foomka, soosaarka kuleylka, karti darrida iyo cimriga gaaban wuxuu xaddidayaa isticmaalka nalalka tungsten.
Ma iibsan karaa qalabka 'MediaLight' bilaa cabbir la'aan?
Eray ahaan, maya, laakiin waa sababta oo ah iftiinka wanaagsan eexda ayaa u baahan in la saxo.
The SMPTE Dukumintiga Tababarka Lagu Taliyay ayaa sheegaya dhalaalka iftiinka eexasho sida ka muuqata dusha TV-ga inuu ka yaraado 10% heerka cad ee ugu sarreeya qalabka daawashada. Cabbir la'aan, xargaha LED-ka ayaa si aad ah u ifaya. Tani waxay sababi kartaa madow madow, saameyn halo xad dhaaf ah iyo diidmada qaar ka mid ah waxtarka isticmaalka nalalka eexda marka hore.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira xaalado aad ku yeelan karto gidaar cad TV gadaashiisa halkii lagugula talin lahaa cirro dhexdhexaad ah. Adoo hagaajinaya iftiinka nalalka waxaad ku hubin kartaa inaysan ka badneyn dhalaalka ugu badan ee lagula taliyay iftiinka deegaanka.
Nidaamyada kale, sida nidaamyada laydhka eex-galka ee laydhku ma yarayn karo, laakiin waxaa loo isticmaalaa iyada oo lagu darayo baffles iyo / ama miirayaasha cufnaanta dhexdhexaadka ah si loo gaadho heerka ugu habboon ee iftiiminta.
Siligga fog ayaa u muuqda mid si xun u gaaban ...
Kontaroolka fog waa fiilo la'aan. :-) Waxa aad arkaysaa waa siligga moodeelka dabka. Dhererka micno malahan maxaa yeelay aaladda kontoroolka fog ayaa ka shaqeysa meel 15 fuudh u ​​jirta. Waxaa jira 6 fuudh oo dheeraad ah oo ah silig leed ah oo ku xidha nalalka. Mar alla markii aad isku xidho mawjadda cabirka ah uma baahnid inaad mar labaad taabato.
Ma ku iibisaa alaabtaada Amazon.com?
Waxaan ku iibin jirnay alaabteenii hore ee 'MediaLight' Amazon. Taasi waa, waan sameynay illaa iyo inta cudurka faafa ee COVID-19 uu ku dhacay. Kadib, amar kasta oo aan loo arkin inuu muhiim yahay si aad ah ayaa loo daahiyay. 30-40 dib u dhac ayaa caadi ahaa.
Dhanka kale, iyadoo qof walba gurigiisa ku xayiran yahay, dalabka TV-yada cusub iyo agabyada kor loo qaaday ayaa sare u kacay, laakiin amarradeenna Amazon waxay ahaayeen kuwo isku xidhan oo aan dhammaad lahayn. Waxaan ogaanay inaanan dib dambe loo arki karin shirkad kale. Waxaan ku wada ridi lahayn ugxanteena maahmaahda ah hal dambiil oo maahmaah ah.
Waxaan go'aansanay inaan ka saarno alaabtayada Amazon oo aan si toos ah u iibino. Iyada oo xafiiskeenu xiran yahay, ayaan ka soo rarnay garaashkeenna waxaanna u qabanqaabinnay qaadista maalin kasta oo aan lala xiriirin karin oo ay qaadaan USPS, UPS iyo DHL.
Intii aan hawsha ku jirnay, waxaan baranay in dadka badankood aysan ahayn soo ogaansho waxyaabaha our on Amazon. Waxay halkaas u aadayeen maxaa yeelay, xaalado badan, way ka sahlanayd. Si kastaba ha noqotee, maahan mid ku habboon markaad heli weydo macluumaadka dhammaystiran ee ku saabsan sheyga oo aad ku dhammaato inaad iibsato cabir qaldan ama qaabka rakibiddaada. Ma ahayn wax ku habboon dadka aan wax fikrad ah ka haysan in 4-ta sano ee nalalka ay weli ku hoos jiraan damaanad 5 sano ah, ama dadka u maleeyay in nalalkayagu midabbada beddeleen maxaa yeelay waxay alaabooyinka ku kala soocayaan qiime ahaan waxayna u qaateen in qiimaheennu macnaheedu yahay in alaabtu midab bay isu beddeleen.
Markii aan soo saarnay taxanaha cusub ee Mk2 bishii Luulyo, waxaan go'aansanay inaan ku bixin doonno kaliya boggeena iyo annagoo u sii marinayna ganacsatada caalamiga ah ee idman. Way ka walwal yar tahay waxaanan baran doonnaa macaamiisheenna badan fiican. Waxaan leenahay wada hadallo badan oo webka ah, wicitaanno taleefan iyo wicitaanno fiidiyoow ah (waxaan eegi doonaa dejintaada ka hor inta aan la rakibin haddii aad u baahato gacan) oo wax badan naga baraysa sida ay macaamiisha u adeegsanayaan alaabtayada Waxaan sidoo kale bixinnaa talo iyo adeeg fiican.
Ka waran shirkaddaada? Khibrad noocee ah ayaad u keentaa dhinaca midab nacaybka?
BiasLighting.com waa qayb ka mid ah Shaybaarada Muuqaalka. La aasaasay 2009, waxaan nahay kuwa daabaca Spears & Munsil Benchmark. Intaas ka hor, aasaasayaasheenu waxay ka shaqeeyeen isla warshadaha iyo warshadaha qalabka fiidiyowga toban sano oo kale, iyagoo daabacaya Digital Video Essentials. Marka, waxaad dhihi kartaa waxaan ku noolahay oo aan ku neefsanaa heerarka tixraaca masraxa guriga wax kasta oo aan sameyno. Waad ku mahadsan tahay takhasuskeena waxaan helnaa khibrada domainka qaar ka mid ah saynisyahano sawir weyn, iyo sidoo kale qaar ka mid ah aaladaha shaybaarka oo aad u fiican.
Meesha iftiinka eexdu waxay ahayd arrin hurdo qurxoon dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay. Marka laga reebo dhowr meelood oo dhalaalaya, sida mid ka mid ah waxyaabaha aan ugu jecel nahay - nalalka hadda la joojiyay ee Iftiinka Fiican (fluorescent), badeecooyinka badankood ee suuqa yaallay waxay ahaayeen kuwo qaali ah, qashin raqiis ah, ama qashin qaali ah. Waxaan jeclaanay saxsanaanta nidaamyada dhaadheer laakiin waxaan dooneynay inaan isku darno saxnaanta iyo ku habboonaanta LED-ka.
Nalal isku mid ah oo qiimahoodu dhan yahay oo nalalka eex ka yimid Amazon ayaa sheegtay inuu yahay 6500K, laakiin LED-yada ma ahan kuwo sax ah gabi ahaanba! Waxay u muuqdeen cagaar iyo buluug! Sideen ku ogaadaa in nalalkaaga eexda ay wax kale ka duwan yihiin?
Dhammaan LED-yada cad waxaa wata diode buluug oo salka ku haya (Fadlan ogow, halkan 2020, barnaamijkeenna 'MediaLight Pro' waxaa wada diode-violet dhow oo aan lahayn buluug buluug ah). Diode wuxuu ku haggaa fotonisyada iskudhafka fosfoorasyada iyo fosfooradaas, markooda, dhalaalaya caddaan. Marka isku dhafka fosfoor tayo sare leh ay sax tahay, waxaad heleysaa heerkulka midabka ee aad u baahan tahay iyadoo ku saleysan sida isha aadanaha ay u aragto midabka.
Waxaad si dhow ugu fiirsan kartaa tayada muuqaalka iftiinka adoo ku baranaya aaladda 'spectroradiometer'. Calaamadda sheegida ee nalalka LED-yada cad ayaa ah kororka buluugga ah ee kor ku xusan (nalalka oo dhan waxay leeyihiin astaamo u gaar ah - tungsten, fluorescent, qoraxda, neon, iwm). In kasta oo ay u egtahay in tani ay sababi doonto iftiin buluug ah, kani waa dhab ahaantii muuqaalka mid ka mid ah aad u saxda ah ee 'LED'. Midabada kale waxay kujiraan kaliya dheelitirka saxda ah ee keena natiijada heerkulka midabka 6500K iyo CRI ≥ 98 Ra. Dabcan, cabbiraadaha waxaa lagu qaaday goob shaybaar la kontoroolo lagana qaaday kaarka cawlan ee dhexdhexaadka ah sida loogu baahan yahay aqrin sax ah oo joogto ah.
Qaybinta Awoodda Muuqaalka ee Taxanaha 'MediaLight Mk2'
Waa inaad heysataa heerar.
Inta badan waxa aan sameyno ma aha wax aad u adag ama xiiso leh, waxaan nahay kaliya qaabab ku saabsan, tanina waxay naga caawineysaa inaan soo saarno alaab sax ah. Markay alaab-qeybiyeyaal noo soo direen qaybaha subpar, ma aysan jarin. Kadib macno ahaan boqolaal LED ah, waxaan helnay alaab-qeybiyeyaal dhisi kara wixii aan u baahnayn. Waxaan soo saarnay hab-dhaqameedyadii ugu wanaagsanaa si looga fogaado faddaraynta oo aan u hubinno in khidmooyinka sare ee aan iibsanayno ay yihiin kuwo run u ah heerkulka midabkooda xitaa ka dib marka la rakibo oo la soo ururiyo.